Safa izigebengu eNhlungwane | News24
Safa izigebengu eNhlungwane
IGAMA lami ngingu Fakazile Mthembu, ngihlala eNhlungwane Area 3. Ubugebengu obulapha buyehlula, umphakathi ubanjwa inkunzi ekuseni, isemini nantambama nasebusuku. Besicela abaphathi [amaphoyisa neKhansela laku ward 54] babambisane nomphakathi kube khona into eyenziwayo nakhu siphela sibe savotela inkululeko. Ekhaya kwagqekezwa ngo-December ngonyaka odlule kwathathwa i-TV sabika emaphoyiseni ngoba siyazi nokuthi yathathwa ubani sambona sivele ngewindi kwavulwa necala eVela Policing Station, umseshi wathi uma simbona lo muntu owathatha i-TV sibafonele, neKhansela salitshela kodwa alikaze lifike ekhaya nabantu abakwi-Structure endaweni bayazi kodwa akukho okwenzekayo. Sicela usizo nakubani ongasitshela ukuthi senze njani ngalobubugebengu obudlange eNhlungwane.
Igama lami ngingu Fakazile Mthembu, ngihlala eNhlungwane area 3 ubugebengu obulaphaya buyehlula abantu babajwa inkunzi ekuseni isemini nantambama nasebusuku. Besicela abaphathi ( amaphoyisa kanye neKhansela laku ward 54) babambisane nomphakathi kube khona into eyenziwayo nakhu siphela sibe savotela inkululeko. Ekhaya kwagqekezwa ngo December last year kwathathwa I-TV sabika emaphoyiseni ngoba siyazi nokuthi yathathwa ubani sambona sivele ngewindi kwavulwa necala eVela Policing Station umseshi wathi uma simbona lomuntu owathatha i-TV sibafonele, neKhansela salitshela kodwa alikakaze lifike ekhaya nabantu abakwiStructure endaweni bayazi kodwa akukho okwenzekayo.
Sicela usizo nakubani ongasitshela ukuthi senze njani ngalobubugebengu obudlange eNhlungwane.